ဒုတိယပို ့စ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ဒုတိယပို ့စ်
- ရဲေဘာ္ ေမာင္တူး
Posted by ရဲေဘာ္ ေမာင္တူး on Jun 15, 2012 in Contributors, Entertainment, Style & Beauty |7comments
အားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြောလိုက်ပါသည်။
ဒီတစ်ခါ တင်တဲ့ဓါတ်ပုံများရှင်လေးကတော့ Zune Thinzar (Sexcii-shawty) ပါ ။
တောင်ကြီးကလို ့သိရပြီး ၊ ရန်ကုန်မှာနေတယ်လို ့သိရပါတယ် ။
သူလေးရဲ ့ဖေ့ဘုတ်လိပ်စာကတော့ ….
ကွန်နက်ရှင်းမကောင်းလို ့၊ ဒီလောက်ဘဲ တင်လိုက်ပါသည် ။ အားပေးကြမည်ဆိုလျှင် ခရီးဆက်မည်။
About ရဲေဘာ္ ေမာင္တူး
ရဲေဘာ္ ေမာင္တူး has written2post in this Website..
View all posts by ရဲေဘာ္ ေမာင္တူး →
အင်းပြောရမှာတော့အားနာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဟိုနေ့က အသိတယောက်ကပြောသွားတယ်။ မန်းဂေဇက် ကို နှစ်ခါလောက်ဝင်ဖတ်ဖူးတယ်။ အညှီအဟောက် ဝက်ဆိုဒ်ပဲတဲ့။ နင်ကဒီဆိုဒ်ပဲ တချိန်လုံးဝင်နေ တယ်။ တော်တော်ဝါသနာပါတယ်လားတဲ့။ ဒီဆိုဒ်ကိုဝင်ဖတ်တဲ့တယောက်က အဲလိုပုံတွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ထားပြီးပြန်ကြည့်တာကိုတွေ့သွားတော့ သူကအဲလိုထင်သွားတယ်။ ကျွန်မလဲသူ့မေးကို တခြားပိုစ့်တွေပို့ ပေး ပြီးမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပေမဲ့ သူကထပ်ဝင်မကြည့်တော့ဘူး။ အဲတော့ သိပ်ထင်သာမြင်သာရှိပြီး တပြည်လုံး ဟော့နေတဲ့ပုံမဟုတ်ရင်တော့ သူ့ချည်းပဲသီးသန့်တင်တာမကောင်းဘူးထင်တယ်။ ဒီပုံတွေ ကလဲ အများမြင်ဖူးပြီးသားပုံတွေပါနေပါတယ်။ သိပ်မဆန်းလှပါဘူး။ မန်းဂေဇက်ကိုဒီလိုထင်ခံရတာ ကျွန်မတကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ကျွန်မအမြင်ကိုပဲပြောပြတာပါ။
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရေ … ခက်တော့ ခက်နေပြီဗျာ …. အဲ့ဒီလိုပုံတွေ ကြည့်ချင်ရင် ဒေါက်တာချက်ကြီး တို့ myanmarcelebrity.com တို့သွားမှာပေါ့ဗျာ။ အဲလိုတွေ တင်ချင်ရင်လဲ .. အဲ့လို site owner တွေစီ mail နဲ့ ပို့ပေးလိုက်ပါဗျာ။ အဲ့ဒီ့ပုံတွေက . သူ့ facebook မှာ public တင်ထားတာတွေ မို့ Credit ကေစ့် တော့မပြောချင်တော့ဘူးဗျာ။ celebrity မဟုတ်တဲ့ အရပ်သူ မို့ …. စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ လို့ ပြောရမှာ တွန့် နေတုန်းပဲဗျာ …။ (ဓာတ်ပုံ တင်ချင်ရင်….. သူများပုံတွေကြည့်ပါ ..ရိုက်ပါ …..ကြိုက်မှ တင်ပါ။)
ကိုအူးလေးရဲဘော် မောင်တူးရေ တပ်ကြပ်ကြီး ရဲစီ အမိန့်ပေးနေပါတယ်…
ဆက်စီ ပုံတွေ တင်ချင်ရင်လည်း ခင်းဗျားကိုယ်တိုင် ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေတင်ဗျာ ဟိုကကူး ဒီကဖြတ်တွေနဲ့ တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ပို့စ်တင်စရာ မရှိလဲ ကကလေးငယ် ချစ်စဖွယ် ခခရေကုံး မလေးပြုံးလောက် တင်ရင်တောင် ဝိုင်းဆွေးနွေးပေးလို့ ရပါတယ် ….အဲဒါလေးဘာဗျာ
ကိုယ်သိသမျှ၊ မြင်သမျှ၊ တွေ့သမျှ သတင်း ကို တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
နဲနဲ စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ..
ဒီလိုပုံမျိုး က sexy ဆိုဒ်တွေမှာပဲ တင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်…
ရဲဘော် မောင်တူးရေ… ကျနော် စာနာတဲ့ စိတ်နဲ့ အရင်ပြောကြည့်မယ်ဗျာ..
ခင်ဗျာစိတ်ကိုနားလည်ပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်က တော်ရုံတန်ရုံ စာရေး ဝါသနာပါရုံနဲ့
ဝင်ရေးလို့မရဘူးမြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရဲဘော်ကလည်း တခြား ဟော့ခ်စေမယ့်
ဆက်ဆီပုံလေးတွေ တင်ပေးပြီး အားလုံးပဲ ကြည့်ကြ မြင်ကြ မန့်ကြပါနော့..။
စေတနာကို နားလည်ပါတယ်။ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တမျိုးဆိုတော့လေ…
တခါတလေ တင်တော့လည်း ကျနော်တို့လည်း မျက်စိပဒါသအဖြစ်ကြည့်ပါတယ်…